ठूला दलमा नेता नै भेटिएन्, बरु महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाऔंः त्रिताल
काठमाडौं । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले ठूला दलका नेतालाई भन्दा बरु जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु ठिक हुने तर्क गरेका छन् । बालुवाटारको सरकारी जग्गा अनियमितताको छानब…
आफूलाई महन्थले साथ नदिने भएपछि ओलीलाई रोक्न बाबुरामलाई अघि सार्ने देउवाको रणनीति
काठमाडौं । जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको निरन्तरता रोक्न नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र महतो समूह लागिपरेको छ । संसदमा ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका …
ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउन उपेन्द्र सक्रिय भएपछि महन्थको आपत्ति, विज्ञप्ति निकाले
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको वैकल्पिकमा अर्को सरकार बनाउन आफ्नो पार्टीका अर्का नेता उपेन्द्र यादव सक्रिया भएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता महन्त ठाकुरले त्यसको आलोचना गरेका छन् । ठाकुरले विज्ञप्ति निका…
प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान, अब नयाँ सरकार कसरी बन्छ ?
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गरेक…
काठमाडौं । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसारको सरकार गठन गरिनुपर्नेमा धारा ७६ (२)को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नु गलत भएको बताएका छन् । ट्विटरमा टिप्पणी गर्दै उनले धारा ७६ …
केपी ओलीले विश्वासको मत पाएनन्, आजै राजीनामा दिने संभावना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन् । आज भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जम्मा ९३ मत प्राप्त भएको छ भने उनको विपक्षमा १२४ मत खसेको छ । कुल २३२ साँसदले मत जा…
संसद विघटन हुन नदिने भए मलाई विश्वासको मत दिनुस्ः ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन नहोस् भन्ने चाहेको हो भने आफूलाई विश्वासको मत दिन अन्य दलका साँसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सोमबार उनले विश्वासको मत…
ओलीले अहिले विश्वासको मत लिन खोज्नु नाटकीय छः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले आएर पूधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन खोज्नु नाटकीय भएको बताएका छनु । सोमबार संसदमा बोल्दै उनले फेरि मध्यावधिमा जान विश्वासको…
देउवालाई अरुले लेखिदिएको पनि पढ्न मुस्किल, ‘ओलीलाई हटाऔं, बहुमतको सरकार बनाऔं’
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाएर नयाँ व्यक्तिको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन लाग्नुपर्ने बताएका छन् । संसदमा सोमबार बोल्दै उनले ओली सरकार कोरोना महामारी निय…